काठमाडौंको यौनबजारमा विदेशी यौनकर्मी, क्यासिनो र डिस्को यौनकर्मीको अखडा - ThikThak Nepal
Home / Newvideos / Thikthakspecial / videos / काठमाडौंको यौनबजारमा विदेशी यौनकर्मी, क्यासिनो र डिस्को यौनकर्मीको अखडा
Newvideos, Thikthakspecial, videos
अब काठमाडौंको यौनबजार नेपाली युवतीको मात्रै वर्चश्वमा रहेन । भारतीयसँगै, चिनियाँ, रसियन र केन्याली यौनकर्मी समेत प्रशस्तै भेटिन्छन अहिले नेपाली यौनबजारमा । काठमाडौंको क्यासिनो, पब, बार, डिस्को जताततै विदेशी यौनकर्मीको उपस्थिती रहेको पाइयो ।
यीमध्ये कोही होटललाई अखडा बनाएर बसेका छन त कोही फ्ल्याट नै भाडामा लिएर । काठमाडौंमा कस्तो छ त विदेशी यौनकर्मीको जालो ?
काठमाडौंको यौन बजारको दृष्य बदलीसकेछ । यहाँ नेपाली मात्रै हैन विदेशी यौनकर्मीको संख्या पनि उल्लेख्य छ ।
केन्याबाट पर्यटकका रूपमा नेपाल आएकी सरिफा । जो यहाँ ‘कल गर्ल’को रुपमा सक्रिय थीन ।
शुक्रबार साँझ ८ वजे एक अफ्रिकी मुलकी युवती हिमालयन ट्राभलर्स इन मुनी रहेको रेष्टुरेण्टमा आइपुगिन । अनुमान गरे पक्कै उनी सरिफा हुन ।
हात उठाएर आफु बसेको टेबलतिर इसारा गरें । उनी मुसुक्क मुस्कुराउँदै आइन ।
वेटर टेबल नजिकै आइपुगे । उनले ‘चिकेन विङ्स’ अर्डर गरिन । संवाद जारी रह्यो ।
‘डु यु लाइक ब्ल्याक गर्ल ?,’
उनले सिधै प्रस्ताव गरिन ।
‘अफ कोर्स !’
‘छिटो गरौं है, कोठामा साथी एक्लै छ, बोर मान्छ,’ उनले अलि हतारिएझै गरिन । हातमा १० हजार रुपैयाँ थमाएपछि भने उनी थप गफिन तयार भइन ।
रेष्टुरेण्टभित्र विदेशी युवा–युवती नाचगानमा मस्त थिए । नाच्नेको भीडमा थीन सरिफा र अर्की एक विदेशी युवती । उनीहरू पाटर्नर परिवर्तन गर्दै नाच्थे ।
ठेगाना तिब्बत, ल्हासा बताउने सुसेनले रेट बताइन ५ सय डलर । सरिफाकै माध्यमबाट सुसेनसम्म पुगियो । यी दुबैको परिचय काठमाडौंमै भएको रहेछ ।
नेपाली यौन बजारमा फाट्टफुट्ट विदेशी यौनकर्मी नभेटिने हैनन । २०६६ मा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले ठमेलको हिमालयन जाभा रेष्टुरेण्ट पछाडीको तीनतले घरमा छापा मार्दा पूरै घरै भाडामा लिएर यौन व्यवसाय चलाएका १४ चिनियाँ युवती पक्राउ परेका थिए । त्यसयता भने विदेशी यौनकर्मी पक्राउ परेका छैनन ।
नेपालमा सक्रिय विदेशी यौनकर्मी अधिकांश होटलमा बस्ने गरेका छन । रसियन लगायतका भने फ्ल्याट लिएरै बसेका छन । यीनले ग्राहकको खोजीका लागि क्यासिनो, पब, क्लवको उपयोग गर्छन । लामो समय यतै बसेकाहरुले एजेन्ट समेत परिचालन गरेको देखियो ।
अधिकांश विदेशी यौनकर्मीको मिट प्वाइन्ट ठमेल, दरवारमार्ग नै हो । ग्राहकको डिमान्ड अनुसार उनीहरू उपत्यका बाहिर समेत जाने गरेको पाइएको छ ।
ठमेल आसपासको क्षेत्र मा विदेशी यौनकर्मी सक्रिय रहेको सूचना आउने गरेको प्रहरि श्रोत्ता ले बताउछ । तर प्रमाण र उजुरी नहुँदा कारवाही गर्न नसकिएको उनको स्विकारोक्ति छ ।
‘रसियन, भारतीय, चिनियाँ युवतीहरु नेपाल आएर यौन धन्दामा सक्रिय छन भने, ‘ बाटोमा हिडिरहेका या डिस्कोमा नाचिरहेका विदेशी युवायुवतीलाई शंका लागेकै भरमा थुन्नु त भएन । प्रमाण भेट्न मुस्किल भएकाले केही गर्न सकिएको छैन ।’
यौनकर्मीको रुपमा सक्रिय विदेशी युवतीहरू अधिकांश पर्यटन भिसामा नेपाल आउने र विभिन्न बहानामा भिसा बढाएर बस्ने गरेको खुल्यो ।
सरिफाका अनुसार उनी नेपाल आएको २ साता भयो । उनी काठमाडौं आएदेखि नै ठमेलको एक गेष्ट हाउसमा बस्दै आएकी छिन । सुसेनको भिसा सकिँदै छ । उनी दुबई गएर २ साता पछि पुनः पर्यटक भिसामा नेपाल आउने योजनामा छिन ।
सरिफाको दाबी अनुसार उनी घर फर्कने पैसा जोहो गर्न यौनधन्दामा लागेकी हुन । काठमाडौं घुम्नकै लागि आएको र यहाँ बस्दा विदेशी युवती भनेपछि यहाँका युवाहरू हुरुक्क हुने बानी देखेर आफु स्वेच्छाले ‘कर्ल गर्ल’ बनेको उनले बताइन ।
‘यहाँ म जस्ता थुप्रै छन्,’ उनले भनिन , ‘नेपालीहरु विदेशी नागरिक सबैलाई पर्यटक ठान्छन । तर यहाँ आउने सबै पर्यटक होइनन्, उनीहरूका आ–आफ्नै बिजनेस छन ।’
सरिफाका अनुसार विदेशी युवतीका अधिकांश ग्राहक नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटक नै हुन । विदेशी युवासँग सम्पर्क गर्न र बस्न समेत सहज हुने उनले अनुभव सुनाइन ।
‘विदेशी पुरुषसँग बस्दा उनीहरु सँगै आएका साथी या जोडी जस्तो लाग्छन । शंका पनि हुन्न,’ उनले भनिन ‘भेट यतै क्लबमा भएको हुन्छ ।’
सरिफासँगको कुराकानीबाट थाहा भयो–धेरैजसो ग्राहकको सम्पर्क दलालमार्फत हुने रहेछ । पछिल्लो समय नेपालका धनाढ्यहरू आफ्नो ग्राहक बनेको उनले सुनाइन ।
सुसेन तीन महिनाको ‘भिजिट भिसा’मा नेपाल आएकी हुन । उनले आफु सकेसम्म नेपालीसँग कुराकानी समेत नगर्ने र विदेशी नागरिक भएमात्रै तयार हुने बताइन ।
‘सरिफाले भनेकाले मात्रै तिमीलाई विश्वास गरेको हुँ । नत्र म नेपालीसँग त्यति सम्पर्क गर्दिन,’ उनले भनिन ‘सिभिल ड्रेसमा प्रहरी हिड्ने भएकाले नेपालीहरुसँग कुरा गर्न डर लाग्छ ।’
ठमेलको क्लबमा ग्राहक खोज्न आइरहने एकजना चिनियाँ युवतीलाई सरिफाले साथी बनाएकी रहिछन । सरिफाको माध्यमबाट ती युवतीसँग पनि भेट भयो ।
एकपल्टको १० हजार रुपैयाँ नेपाली लिन्छिन । नेपालीले पैसा दिँदैनन भनेर सम्पर्क राख्न डराउँछिन ।
को पर्यटक, को यौनकर्मी ?
ठमेलमा यौनकर्मी खोजिरहेका अधिकांश ग्राहकहरू भन्छन्– ‘विदेशी यौनकर्मी भेट्न एकदमै गाह्रो छ ।’ ठमेलको पर्पल हेजमा भेटिएका आफूलाई सुसान्त बताउने युवक भन्दै थिए, ‘विदेशी आइटमसँग रमाइलो गर्ने चाहना छ । यहाँ पाइन्छन भन्ने पनि सुनेको छु । तर यहाँ को पर्यटक, को यौनकर्मी ? कसरी चिन्ने ।’
त्यसो त सरिफा, सुसेन, डङ्मी सबै पर्यटक भिसामा यहाँ आएका हुन । सरिफा भन्छिन्, ‘म पर्यटक हुँ, मेरो भिसा यसको प्रमाण हो ।’ तर पर्यटन त बहाना न थियो, खासमा त उनी यहाँ यौनकर्मी हुन जुन उनको कामले प्रष्ट पारिसकेको थियो ।
‘रसियनहरु धेरैजसो क्यासिनोमा भेटिन्छन्, मेरो साथी काठमाडौंको क्यासिनोमा काम गर्छ । उसैले रसियन युवतीसँग सम्पर्क गराइदिएको हो ।’ एक युबक ले बताए
उनका अनुसार रसियन युवतीले उनलाई ललितपुरमा रहेको एक घरमा लगेका थिए । रेट १५ हजार रुपैयाँ थियो ।
राठौरका अनुसार ‘धेरैजसो रसियन युवतीहरूको टार्गेट क्यासिनो हुन्छ । उनीहरु त्यताबाट ग्राहक लिएर आफ्नै फ्ल्याट र अपार्टमेन्टमा जान्छन ।
मोडलिङ गराइदिने बहानामा भारतीय युवतीहरुलाई नेपाल ल्याएर यौनधन्दामा लगाउने गरेको समेत छ ।
अधिकांश विदेशी यौनकर्मी नेपाली रुचाउँदैनन । विदेशी यौनकर्मीहरूले आफ्नो परिचय खुल्ने र प्रहरीले पक्राउ गर्ने डर र मागे अनुसारको पैसा दिन राजी भए पनि पछि पैसा नदी हिड्ने भएकाले विश्वसनिय च्यानलमार्फत आएका बाहेकको नेपालीसँग नजाने बताए ।
नेपालीहरुसँग डराएपनि विदेशीहरुसँग भने उनीहरु खुलेर कुरा गर्छन र राजी पनि हुन्छन । ‘उनीहरू त यहाँ घुम्न र रमाइलो गर्न नै आएका हुन नि, त्यसैले उनीहरु हामीलाई खोजिरहेकै हुन्छन्,’ सरिफाले भनिन ।
धेरैजसो रसियन युवतीको टार्गेट क्यासिनो हुन्छ । उनीहरू त्यताबाट ग्राहक लिएर आफ्नै फ्ल्याट र अपार्टमेन्ट लान्छन । कतिपयले डिस्को र बारमा पुगेर ग्राहक खोज्छन ।
काठमाडौंको यौनबजारमा विदेशी यौनकर्मी, क्यासिनो र डिस्को यौनकर्मीको अखडा Reviewed by ThikThak TV on June 07, 2017 Rating: 5